သစ်သား Block ကိုပဟေဠိ | အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » သစ်သား Block ကိုပဟေဠိ
သစ်သား Block ကိုပဟေဠိ APK ကို
အဆိုပါပိတ်ပင်တားဆီးမှုပဟေဠိအားလုံးအသက်အရွယ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်အတွက်အလွန်ပျော်စရာပါပဲ။ ပိုများသောသစ်သားလုပ်ကွက်ပိုရမှတ်။ ဒါကြောင့်ကြိုးစားပါနှင့်သင်သစ်သားပိတ်ပင်တားဆီးမှု game.Wood Block ကိုပဟေဠိတစ်ဦးဂန္ပဟေဠိပိတ်ပင်တားဆီးမှုဂိမ်း, ဒါပေမယ့်တစ်စိန်ခေါ်မှုပဟေဠိဂိမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဦးနှောက်အနားယူနှင့်လေ့ကျင့်ရန်ဤသစ်သားစတိုင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဂိမ်း Play ။
ရိုးရှင်းသော, ပျော်စရာအပေါင်းတို့နှင့်တကွလူကြီးများနှင့်ကလေးများအဘို့အပျြောမှေ့စ။ ဒါဟာအကြီးအပဟေဠိပိတ်ပင်တားဆီးမှုဂိမ်းအားလုံးအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။
သစ်သားစတိုင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဂိမ်း Play, သင်သည်ဤသစ်သားပိတ်ပင်တားဆီးမှုပဟေဠိဂိမ်းခစျြလိမျ့မညျ။
-> အတန်းသို့မဟုတ်ကော်လံအတွက်သူတို့အားလုံးကို fit ဖို့ကြိုးစားပါ။ ထိုအခါသစ်သားလုပ်ကွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လိမ့်မည်, သင်မှတ်ရ။ အဆိုပါဇယားကွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆိုသည့်ပုံစံမျိုးစုံမအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်လျှင်ဂိမ်းကျော်ဖြစ်လိမ့်မည်။
-> Beginner ရဲ့လမ်းပြမှုနှင့်အတူသင်ယူဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
ယခု မှစ. ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်စွဲလမ်းသစ်သားပိတ်ပင်တားဆီးမှုပဟေဠိဂိမ်းပျော်မွေ့ပါစေ! သင်စတင်ပြီးတာနဲ့သင်ကချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်!
20.93 ကို MB
အနီရောင် Wood ကပြန်ဖွင့်